यी हुन पिसाव पोल्ने समस्या समाधानका ९ घरेलु उपाय – mero sathi tv
यी हुन पिसाव पोल्ने समस्या समाधानका ९ घरेलु उपाय
On २४ फाल्गुन २०७४, बिहीबार १३:१६
३ .दुई चम्चा धनिया बेलुका भिजाउने र बिहान उठेर मिश्रीसँग सेवन गर्नाले पनि पिसाव पोल्न कम हुन्छ ।
४. पिसाव पोल्ने रोगीले प्रशस्त पानी पिउनुका साथै छारयुक्त पदार्थको सेवन गर्ने ।
५. हर्रो बर्रो र अमला चूर्णं एक गिलास पानीमा बेलुका भिजाइ बिहान बिहान सेवन गर्ने गरेमा पनि पिसाव पोल्न कम हुन्छ ।
६. दत्तिवनका केही पात वा डाँठहरुलाई पानीमा पकाउने र त्यसमा हर्रो बर्रो र अमला चूर्ण समेत मिलाइ नियमित १५ दिन सेवन गरेमा पिसाव सम्वन्धि धेरै बिरामी निको हुन्छ ।
दैनिक कति बन्छ पिसाब ? कतिपटक फेर्नु पर्छ ?
सामान्यतया एक दिन अर्थात चौविस घण्टाको अवधिमा स्वस्थ मानिसको शरीरमा १५ सय देखि २ हजार मिलिलिटर पिसाब बन्छ । तर पानी कम खाने वा धेरै खानेहरुमा यो परिमाणमा केही तलमाथि हुनसक्छ ।
स्वस्थ मानिसको पिसाब थैलीको क्षमता भनेको २ सय देखि ३ सय मिलिलिटरसम्मको हुन्छ । उक्त थैली भरिनेबित्तिकै मानिसलाई पिसाब फेर्न मन लाग्छ । सोझो अर्थमा हेर्दा पनि औसतमा १५ सय एमएल पिसाब निस्कने मानिसहरुले दैनिक पाँच पटक पिसाब फेर्नु पर्ने हुन्छ ।
एक दिनमा एउटा मानिसले ४ देखि ६ पटकसम्म पिसाब फेर्छ भने त्यसलाई समान्य रुपमा लिन सकिन्छ तर त्यो भन्दा धेरै वा कम पिसाब आउँछ भने त्यसलाई समस्याका रुपमा लिन सकिन्छ ।
पिसाब कम आउनुको कारण मानिसले कम मात्रामा पानीको सेवन गरेर पनि हुनसक्छ । कम पानी पिँउदा पिसाब थैलीमा संक्रमण हुने खतरा रहन्छ । यस्तै पिसाब लाग्दा लामो समयसम्म रोक्दा पनि पिसाब थैली तथा नलीमा संक्रमण हुन सक्छ ।
पहेँलो पिसाबले खतराको संकेत हो ?
सामान्यतया पिसाबको रगं हल्का पहेँलो देखि अलि गाढा पहेँलोसम्म हुन सक्छ । यदि अचानक पिसाब पहेँलो आएको छ र पानी खानेबित्तिकै पहेँलोपन हराउँछ भने चिन्ता गर्नु पर्दैन । तर एक दिन भन्दा बढि यस्तो भयो भने स्वास्थ्यमा समस्या निम्तिएको हुन सक्छ ।
पिसाब थैली तथा नलीमा संक्रमण हुँदा के हुन्छ ?
पिसाब थैली तथा नलीमा संक्रमण हुँदा पिसाब फेर्दा, पोल्ने, दुख्ने, पिसाब लाग्ने बित्तिकै गइहाल्नुपर्ने, पिसाबलाई रोक्नै नसक्ने, पिसाब गन्हाउने, रगत देखिने, छिनछिनमा पिसाब लाग्ने, राती सुतेको समयमा पनि पिसाब लागि रहने, पिसाब लागे जस्तो हुने तर शौचालयमा जाँदा थोरै मात्र आउने जस्ता लक्षण देखा पर्छ ।
पिसाबको संक्रमण पुरुषको तुलनामा महिलामा धेरै हुने गर्छ महिलाको पाठेघर र पिसाब थैली एकदमै नजिक रहेको तथा पुरुषको तुलनामा महिलाको पिसाब नली निकै छोटो भएको कारण महिलालाई धेरै सताउँछ । संक्रमणका कारण पिसाब थैलीको भित्रको म्युकोज (थैलीको भित्रपट्टी रहेको छालाजस्तो भाग)मा घाउ बनेको हुन्छ ।urinary-tract
सामान्यतया पिसाब एसिडिक हुने हुँदा उक्त घाउमा पिसाब पर्दा पोल्ने समस्या देखिन्छ । पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निस्कने बिकार (क्रिस्टल) सियो जस्ता हुन्छन् । कम पानी सेवन गरेमा उक्त क्रिस्टलले पिसाब थैलीमा घोच्छ र दुख्न थाल्छ । उक्त घोचाइ बढ्दै जाँदा घाउ हुन्छ र थप समस्या निम्तिने गर्छ ।
पिसाब थैली तथा नलीमा हुने कुनै पनि संक्रमणले थैली र नलीको भित्तामा घाउ बनाउने हुँदा उक्त घाउमा एसिडिक पिसाब पर्दा पोल्ने दुख्ने समस्या हुन्छ ।
सामान्यतया जुनसुकै संक्रमणका कारण संक्रमण भएको क्षेत्र र वरपर रातो हुने, सुन्निने, तातो हुने, दुख्ने र सामान्य कार्यमा अबरोध सिर्जना हुन्छ । पिसाबको संक्रमणमा पनि यही समस्या देखापर्ने हो ।
सरसफाइको कमी, सन्तुलित आहारको कमी, अन्य संक्रमणका कारण कहिलेकाहीँ पिसाब एसिडिकबाट अल्कोलाइन बन्छ। पिसाब अल्कोलाइन हुँदा ब्याक्टेरियाले हुर्कने राम्रो वातावरण पाउँछन् र संक्रमणले तुरुन्तै समाति हाल्छ । यस्तो अवस्थामा पिसाबमा क्रिस्टल बन्ने सम्भावना पनि अत्यधिक रहन्छ । संक्रमणका कारण पिसाब गन्हाउने समेत हुन्छ । चिकित्सकीय भाषामा यस्तो समस्यालाई प्युरिया भनिन्छ । संक्रमणले नाइटोमुनी समेत दुखाउँछ ।
पिसावको संक्रमणबाट कसरी जोगिने ?
पिसाबको संक्रमणबाट जोगिनका लागि प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, अमिलो फल जस्तै कागती, मौसम सुन्तला खाने । यी फलमा साइट्रस एडिस हुन्छ । जसले मूत्र संक्रमण गराउने जिवाणु नष्ट गर्न सहयोग गर्छ । त्यस्तै यौनांगको सरसफाइसंगै ब्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने, शुद्ध पानी पिउने, नुहाउदा तेल लगाएर नुहाउने तथा पिसाबको बिभिन्न समयमा जाँच गर्ने गर्नु पर्छ ।
पिसाब पोलेको जस्तो अनुभव हुने बित्तिकै मानिसहरु आफूखुसी एन्टीबायोटिक खान्छन् । त्यो सरासर गलत काम हो । पिसाबको संक्रमणलाई सामान्य रुपमा लिएर हेलचेक्र्याँइ गर्दा गम्भीर समस्या निम्तने खतरा रहन्छ । यस्तो समस्या भएमा पिसाबको ल्याब परीक्षण गराउने र चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम मात्र औषधि खाने खाने गर्नु पर्छ
# डा. रौनियार ‘लाइफ इन्टरनेशनल क्लिनिक’ मध्यबानेश्वरमा कार्यरत छन् ।
के तपाईंलाई छिन-छिनमा पिसब लागि रहन्छ ? यसो गर्नुहोस्
कागती सेवन गर्नु हुन्छ ? जान्नुहोस कागतीका बेफाईदा पनि छन ! यस्तो अवस्थामा कागती सेवन नगर्नु
जन्डिस भएमा के खाने, के नखाने
कालो अंगुर खाँदा यस्तो फाइदा
मात्र अम्बाको एक पातको प्रयोगले हटाउने छ, यी ८ खतरनाक रोगको समस्या, यसरी गर्नुहोस…
डण्डीफोरको समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यी खानेकुमा ध्यान दिनुहोस्..
फास्टफुड स्वादीलो बनाउने एमएसजी के हो, कसरी गर्छ शरीरलाई हानी ?
ग्यास्ट्रिकका लक्षण र यसबाट बच्ने उपाय
आलो मासु भन्दै अस्वस्थ मासु खान्छन् उपभोक्ता